Archive du 20200509
Institut Pasteur de Madagascar Tsy atokisan’ny fanjakana intsony ?
Nisy ny fivoriana niarahana tamin’ny Fiohan’ny Repoblika, ka tsy maintsy misy ny fepetra raisina manoloana ny tarehimarika miteraka savorovoro, hoy ny Minisitry ny serasera Lalatiana Andriatongarivo.
Lalatiana Andriatongarivo " Maro be ireo tsindry iainan'ny governemanta ..."
Namaly bontana manoloana ny serasera avy any ivelany toy ny an’ny CEDEAO ny minisitry ny serasera Lalatiana Andriatongarivo.
Manahy ny HVM Miteraka savorovoro ny tsy fahampian` ny fepetra
Miteraka ary hiteraka savorovoro ny tsy fanomezana fanazavana momba ny fahafahana manao fitiliana faobe na tsia avy amin`ny fitondram-panjakana, hoy ny antoko HVM.
Fiainam-pirenena Fotoana tokony hitezerana amin'ny vahoaka ve izao?
Raha ny zava-mitranga teny amin`ny fiarahamonina taorian` ny nahitàna sy nampalaza ny tambavy CVO no nivaha tsikelikely ny fitandremana teo amin`ny tsirairay.
Herinandron` i Eoropa Notanterahina tamin`ny alalan` ny aterineto
Tamin` ity taona ity, noho ny valanaretina Coronavirus, ary ho fanajàna ireo fepetra noraisin` ny fanjakana, dia nofoanana ireo hetsika fankalazana ny Herinandron`i Eoropa eto amintsika.
Roland Ratsiraka “Ampitomboy ny fitiliana, ajanony ny fihibohana"
Namaivay ny tsikera nomen’ny depioten’i Toamasina I, Roland Ratsiraka, ny fitondram-panjakana nandritry ny fandraisam-pitenenany tetsy amin’ny Carlton Anosy omaly.
Ihosy Nosoloina ilay “gardien chef” tao amin’ny fonja
Fantara izao, avy amin’ny fampitam-baovaoa avy any an-toerana, fa efa nosoloina vaovao ny lehiben’ny fandraharahana ny fonja “gadien chef” ao amin’ny fonjan’
Razafindrakoto Fidy na i Besetroka Niova taranja tanteraka
Niova taranja ara-bakiteny na eo amin’ny fiangaliana taranja ara-panatanjahantena na eo amin’ny sehatry ny fanaovana politika ny CT teo aloha, Razafindrakoto Fidy Mamy Helison na i Besetroka ankehitriny.
Famadihana zava-maniry ho fanafody Misy fepetra 3 tsy maintsy arahina
Nohazavain’ny Pr Rafatro Herintsoa, misy fepetra telo tsy maintsy voahaja raha toa ka te hamadika zava-maniry ho lasa fanafody araka ny lalana iraisam-pirenena.
Hopitaly manara-penitra ao Toamasina Tsy ampy ny respirateur hamonjena ireo marary
Mbola tsy manana ilay fiara 4x4 toy ny hitantsika eto an-drenivohitra misy ilay soratra COVID 19 ireny ny foibem-pibaikoana na ny CCO ao an-drenivohitr’i Betsimisaraka raha araka ny fantatra.
Fetison Rakoto Andrianirina Atsangano ny vaomiera ara-toekarena sy sosialy
Amin’ny alalan’ny fakan-kevitra mivelatra no itondran’ny tsirairay ny anjara birikiny hoenti-manarina ny toekarana sy ny sosialy aorian’ny valanaretina
Banky Foiben’i Madagasikara Hamoraina ny famatsiam-bolan’ireo orinasa
Niompana tamin’ny voka-dratsy ara-toekarena ateraky ny valan’aretina COVID-19 ny fivorian’ny Komity ara-bola eo anivon’ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) omaly.
American School Tsy miverina an-dakilasy intsony ny mpianatra
Ho amin` ity taom-pampianarana 2019-2020 ity dia nanapa-kevitra ireo tompon'andraikitra eo anivon` ny American School of Antananarivo (ASA) fa tsy miditra an-dakilasy intsony ny mpianatra mandrapaha-tapitra ny taom-pianarana.
Sekolim-panjakana Tsy nianatra ny mpianatra fa nozaraina fanampiana
Saika tsy nianatra avokoa ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana manovo fahalalana eny anivon’ny sekolim-panjakana omaly zoma.
Fokontany Anatahizo II Fianakaviana 3200 nozaraina savony sy arotava
Mitombo isa hatrany ireo olona mararin’ny coronavirus eto amintsika. Ankoatra ny olon-dehibe dia maro ihany koa ireo ankizy lasibatra, antony nanosika ny Association Ahmadiyya Musulmane de Madagascar hijery manokana ireo
Toamasina Olona 25.000 amin’ireo 300.000 no mba nahazo fanampiana
Vao 25.000 monja ireo olona nahazo fanampiana avy tamin’ny fanjakana hatreto ho an’i Toamasina raha mahatratra 300.000 isa ireo ny mponina any an-toerana hoy ny solombavambahoaka voafidy ao Toamasina I Roland Ratsiraka omaly
Tsy fitandremana sa mosavy ? Nisy lame tao anatin'ilay mofo dibera
Mpanjifa mofo dipaina voahosotra dibera iray omaly maraina no namoaka tamin’ny tambajotran-tserasera facebook fa nisy lame tao anatin’ilay mofo novidiany tranga niseho tany amin’ny distrikan’i Nosy Be.
Tsenan` Antarandolo- Fianarantsoa Hahazaka mpivarotra 400 isa
Nidina nijery ifotony ny asa fanamboarana ny tsenan` i Antarandolo ao Fianarantsoa ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaraham-pahefana, Tianarivelo Razafimahefa.
Fampidirana jiro sy rano Tsy maintsy voaloha ny hetran-trano vao mety
Betsaka ireo olona tsy manao ho laharam-pahamehana ny fandoavan-ketra na dia tamin’ny fotoana tsy mbola nisian’ny coronavirus teto amintsika aza.
Sekoly tsy miankina Tsy mbola misitraka ny fanampiana
Nodradraina fa hizarana fanampiana avokoa ireo mpiasa tss an'asa eto Madagasikara.
« Secrétaire – Trésorier » eny amin`ny fokontany Nofanina momba ny leadereship
Nomena fiofanana ireo « Secrétaire – Trésorier » vaovao voatendry isaky ny Fokontany eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra mba ho famerenana ny hasin’ny Fokontany sy ny andraikitr’izy ireo.
Anosibe Hentitra ny mpitandro filaminana
Hentitra ary tena masiaka tokoa ny mpitandro ny filaminana polisim pirenena eny amin ny faritra Anosibe ankehitriny.
Fanajàna ny elanelana 1 metatra Lasa resaka fotsiny sisa
Mila andraisana fepetra ny fanajàna elanelana iray metatra izay isan` ireo fepetra hahafahana misoroka amin`ny fiparitahan` ny aretina COVID-19.
Tranga mampiahiahy momba ny Covid-19 Olona 67 nambara fa voa averina tiliana
Nisy ny tranga vaovao 35 notaterina afak’omaly, izay nampitsangam-bolo ny Malagasy.
Liva Razafindrasolo « Tsy maty paika ny paikady »
Manoloana ny krizy ara-pahasalamana mianjady amin` izao dia nitondra ny heviny ny mpandinika ara-politika, Liva Razafindrasolo indrindra mahakasika ny fomba hitantanana ny firenena.
Lehiben’ny OMS aty Afrika Nampitandrina an-dRajoelina…
Nampitandrina ireo mpitondra Afrikanina ny Dr Matshidiso Moeti, lehiben'ny OMS aty Afrika mba tsy ho alaim-panahy hamoaka tambavy tsy nandalo
Distrikan'Avaradrano Hosaziana mafy ireo tratra tsy manao arotava
Hentitra ny distrikan'Avaradrano manomboka izao amin'ireo olona tsy manao arotava.
Raharaha coronavirus Hifanatrika amin’ny depiote ny governemanta
Hotanterahina ny talata 12 mey izao ny fihaonana eo amin’ny depiote sy ny governemanta, araka ny fampiantsoan’ny parlemantera.
Tanànan’i Toliara Tsy mankasitra ny hanaovana « cache-bouche » izany
Tsy dia mankasitraka ny hanaovan’ny olona « cache-bouche » izany ny mponina any amin’ny tanànan’i Toliara tsy miroro, araka ny vaovao voaray avy any an-toerana.